Voaheloka Namono An-kerisetra Tovovavy Ilay Ramatoa Mitondra Vohoka Sy Ny Vadiny Tao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2013 17:43 GMT
Vehivavy bevohoka iray no voalaza fa naka an-keriny tovovavy 17 taona mba hanao firaisana ara-nofo amin'ny vadiny, nanampy ny vadiny tamin'ny famonona ilay tovovavy izy mba hanafenana ny asa ratsy vitan'izy ireo, hoy ny filazan'ny polisy [zh] avy ao avaratra-atsinanan'i Heilongjiang, ao Shina tamin'ny 25 Jolay 2013.
Ny folakandron'ny 24 Jolay, nandalo tao amin'ny kirihitr'ala ao Jiamusi an-dalana hamonjy ny tranon'ny mpiara-mianatra aminy i Hu Yixuan, mpianatra mpanampy mpitsabo 17 taona, raha nahatsikaritra vehivavy bevohoka nitorovoka tamin'ny tany. Niangavy tamin'i Hu ity vehivavy bevohoka sy hita ho mitaintaina mafy ity mba hanampy azy hiakatra ambony rihana any an-tranony.
“Manampy renim-pianakaviana hody any an-tranony. Vao tonga.” Hafatra nalefany tamin'ny namany iray ao amin'ny Wechat tamin'ny 3:18 hariva, toa nanjary hafatra fara-veloma ny hafatra voapetraka tao amin'ilay servisy mpikarakara somaiso sy hafatra am-bava am-pinday.
Araka ny filazan'ny Dbw.cn [zh], vavahadim-baovao lehibe indrindra ao Heilongjiang, heverina ho nentin-dRamatoa Tan niditra tao an-trano ilay tovovavy ary nomeny tavoahanginà yaourt efa nasiany fampatoriana. Nilaza ny loharanom-baovaon'ilay tranonkala fa saiky hanolana azy ireto mpivady avy eo, saingy tsy nahavita izany satria tao anatin'ny fadim-bolana ilay tovovavy. Araka ny filazan'ny habaka ihany koa, na dia saiky hampandeha ilay tovovavy aza ilay ramatoa dia tsy nanaiky rangahy fa nanakenda azy tamin'ny ondana.
Nisy nahita anefa ny fandehan-javatra sy ny nitondran'izy mivady ny fatin'i Hu tao anaty fiara. Naharay antso avy amin'ny fianakavian'ilay tovovavy ny polisy ny 26 Jolay ka voasambotra izy mivady roa andro taty aoriana. Naterina teny amin'ny hopitaly ilay vehivavy mitondra vohoka 8 volana.
Sarin'ilay niharam-boina Hu Yixuan, Tao amin'ny Sina Weibo.
Nampiady hevitra fatratra ny antony nanetsika ilay ramatoa hanao izao fihetsika izao. Nilaza tao amin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana Global Times ny polisy ao an-toerana fa niaiky ireo voarohirohy fa naka an-keriny ilay tovovavy mba hanonerana (ho solon'ny) ny ahiahin-drangahy ho nofitahin'ny vadiny.
Na dia izany aza, mifanohitra amin'izany ny loharanom-baovao azon'ny Dbw. “Tsy marina izany. Bevohoka izy ka tsy afaka manao firaisana izy ireo, dia nitady tovovavy hoan'ny vadiny izy (mba hiray aminy). Efa ela izy no nanana izany hevitra izany.”
Tsy niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpiserasera Shinoa tao amin'ny bilaogy madinika malaza Sina Weibo ihany ny herisetran'ireto mpivady ireto fa niteraka adihevitra teo amin'izy ireo ihany koa fiarovan-tena nataon'izy mivady.
Tezitra mafy i Wang Zhuo [zh], mpikambana ao amin'ny Komity maharitry ny Komity fakan-Kevitra momba ny politikam-bahoaka:
Tokony hosaziana mafy ireto mpivady vetaveta ireto.
Mpisolovava monina ao Shanghai, Wang Yinyi [zh] nihevitra mahamenatra ny tsy nampiharana tamin'ilay vehivavy ny sazy fanamelohana ho faty:
Nahita olona hataon'ny vadiny kilalao ara-nofon'ny vadiny ilay vehivavy bevohoka dia tovovavy saika hamonjy azy, alohan'ny hamonoana an-kerisetra. Tsy takatry ny saiko hoe olombelona no mahavita izany. Niteny i Sartre hoen “ireo hafa no helo (afobe)”, saingy eto mety ho helo avokoa na iza na iza, ary mety ny hatsaram-panahy mihitsy no hitarika anao mankany amin'izany. Mahamentra fa fa mitondra vohoka ilay ramatoa ka tsy afaka helohina ho faty.
Filoha Tale Jeneralin'orinasa momba ny aterineto Ma Yan [zh] namaly izany tamin'ny hevitra hafa mihitsy:
Diso famaha olana. Ny fivarotan-tena no avelao ho ara-dalàna.
Diso fanantenana tanteraka amin'ny maha-olombelona, na ny tsy fisian'izany i Nie Weiping [zh]:
Tsy azo saintsainina fa renim-pianakaviana no nahavita izao. Lozabe, tsy misy fo, tsy nianatra lalàna sady tsy misy izay mahaolombelona. Tsy afa-miaro tena manoloana azy ireny ianao.
Mpahay tantara ‘Shanshui You Yan’ [zh] naneho ny ahiahiny:
Ny voka-dratsin'ity voina ity dia tsy hisy mpamonjy intsony ireo vehivavy mitondra vohoka eny an-dalambe…
Mpanoratra Bai Xiaofan [zh] nanoso-kevitra mba haka lesona amin'ilay tantara mitohy malaza Amerikana “Criminal Minds” amin'ny fahitalavitra ny tovovavy hiarova-tena:
Izany indrindra no mahatonga ahy hilaza amin'ireo tovovavy mba hijery ny Criminal Minds. Mampitatra ny fahatsiarovantena hahay miaro tena amin'ny lafiny maro. Ohatra, raha mahita zaza very ianao, na olona miaraka amin'ny biby fiompiny maratra, na vehivavy bevohoka marary, ny fihetsika tsara tokony atao dia ny miantso polisy, miantso ny fianakaviany, miandry eny amin'ny toerana somary be olona ary mandefa azy eny amin'ny hopitaly – fa tsy mandeha amin'ny toerana iangaviany hitondranao azy. Ataovy an-tsaina tsara izany.